हायात प्रकरणमा तीन वर्षदेखि छानबिन मात्रै - कारोबार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
मणि दाहाल काठमाडौं चैत १
श्रृंखलाबद्ध छानबिनले दोषी ठहर गरे पनि अर्बौंको सरकारी सम्पत्ति हड्प्ने सराफ र श्रेष्ठ परिवारसदस्य कानुनी दायमा पर्न सकेका छैनन्।
हायात होटलको सञ्चालक कम्पनी तारागाउँ होटल्स लिमिटेडका निजी साझेदारले जालझेल गरी सरकारी सम्पत्ति हत्याएको सम्बन्धमा राज्यका तीन शक्तिशाली निकायहरुले छुट्टाछुट्टै छानबिन गरिरहेका छन्।
संसदीय समिति, अख्तियार र भूमिसुधार मन्त्रालयले अलग अलग समिति गठन गरी छानिबन गरिरहेका हुन्।
तारागाउँ होटल्स लिमिटेडका निजी साझेदारहरु राधेश्याम सारफ तथा रामलाल श्रेष्ठ परिवार सदस्यले सरकारी सम्पत्ति हत्याएकोबारे पहिलो पटक अनुसन्धान भइरहेको होइन। सरकारका निकायहरुले तीन वर्षदेखि यो विषयमा निरन्तर र फरक फरक कोणबाट छानिबन गरेका छन्।
२०७२ चैतमा तारागाउँ विकास समिति तथा पर्यटन मन्त्रालयका दुई छुट्टाछुट्टै कार्यदलले छानबिन गरेका थिए। ती अनुसन्धानहरुले हायातका निजी साझेदारहरु सराफ तथा श्रेष्ठ परिवार सदस्यले बद्नियत राखी २५ अर्बभन्दा बढीको सरकारी सम्पत्ति हत्याएको स्पष्ट प्रतिवेदन दिएका थिए। उनीहरुले थप अनुसन्धान हुनुपर्ने औंल्याएका थिए।
यतिबेला संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले उपसमिति बनाएर यो प्रकरण छानबिन गरिरहेको छ। कम्पनीको सेयर संरचना, सम्पत्ति स्वामित्व, वैदेशिक लगानीजस्ता अलगअलग विधागत विषय भएकाले अनुसन्धान जटील रहेको उपसमिति संयोजक सांसद अग्नि सापकोटा बताउँछन्।
‘अनुसन्धानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौं। संसदीय समितिले छिटै यो विषयबारे स्पष्ट निष्कर्ष दिनेछ’, सापकोटाले नेपालखबरसँग भने। २०७५ मंसिर १९ देखि पटक–पटक म्याद थपेर उपसमितिले साढे ३ महिना अनुसन्धान गरिसकेको छ। यो छानबिन यसै साताभित्र निष्कर्षमा पुग्ने उनले जानकारी दिए। केहीअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि हायातका विषयमा छलफल भएको थियो। तर त्यहाँ रहस्मय रुपमा अचानक छलफल रोकिन पुगेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हायातको विषयमा छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ। अख्तियारले होटलका निजी साझेदारसँग बयान लिने काम समेत गरेको छ। तारागाउँ विकास समितिका पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारीसँग बयान लिने काम पूरा गरेको अख्तियार स्रोतले नेपालखबरलाई बतायो।
‘हायात प्रकरण निष्कर्ष दिने र बिगो माग दाबीसहित अभियोगपत्र बुझाउने अवस्थातर्फ अघि बढेको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘केही प्राविधिक विषय टुंग्याएपछि यो विषय अघि बढ्छ।’
२०७५ साउनमा मन्त्रिपरिषद स्तरीय निर्णयबाट समेत हायात होटल घोटालाको छानबिन समिति गठन प्रयास भएको थियो। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित नगर्दा सो निर्णय हुन पाएन।
जग्गा पासको २५ वर्षपछि छानबिन
होटल हत्याउने योजनाअनुसार २०५० चैतमा निजी साझेदारहरु राधेश्याम सराफ तथा रामलाल श्रेष्ठ परिवार सदस्यले बौद्धस्थित सरकारको १५० रोपनी जग्गा गैरकानुनी रुपमा तारागाउँ होटल्स लिमिटेडको नाममा रजिष्ट्रेसन पास गराएका थिए। सो कम्पनी हायातको सञ्चालक कम्पनी हो। मालपोत ऐन २०३४ अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयबिना सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्न पाइँदैन।
जग्गा गुमाएको २५ वर्षपछि यो विषयमा सरकारले छानिबन थालेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उपसचिव तथा नापी अभिलेखालयका निर्देशक सम्मरसिंह बहादुर ठकुरीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय छानविन समिति गठन गरी अनुसन्धान अघि बढाएको हो। एक साताको समय पाएको समितिले आज चैत १ देखि काम सुरु गर्दैछ।
पुराना दस्तावेजअनुसार हायात होटल हत्याउने यो प्रकरणको छानबिन २०७२ मंसिर १८ देखि सुरु हुन्छ। सो मितिमा तारागाउँ विकास समिति सञ्चालक समिति बोर्डले अध्यक्ष नारदकुमार लुईंटेल नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी जग्गा तथा शेयर लगानी अवस्थाबारे पहिलो पटक अध्ययन गरेको थियो। सो कार्यदलले स्पष्ट रुपमा निजी सञ्चालकहरुले शेयर संरचनामा चलखेल गरी सरकारी सम्पत्ति हत्याउन प्रयास गरेको औंल्याएको थियो। होटल स्थापनादेखि कम्पनीको कारोबारसहितका विषयमा थप अनुसन्धान हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
सरकारलाई झुम्रा पुतलीको व्यवहार
पर्यटन मन्त्रालयले २०७२ चैत २८ मा सचिवस्तरीय निर्णयबाट तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडबाट अस्वभाविक रुपमा सरकारले सेयर गुमाएको विषयमा छानबिन गर्न लुइँटेलकै संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गर्यो। रोमाञ्चक त यो छ कि सरकारको यो समितिलाई हायातका निजी साझेदारहरुले सेयर स्वामित्वबारे कागजात उपलब्ध गाएनन्। नियत राखेरै सूचना दिएनन्। सरकारलाई झुम्रा पुतली समान ठाने।
‘त्यतिबेलाको सरकारी छानबिन समितिलाई निजी साझेदारहरुले अटेर गरेर आवश्यक जानकारीहरु उपलब्ध गराउने काम गरेनन्,’ छानबिन समितिका तत्कालीन संयोजक लुइँटेल नेपालखबरसँग भन्छन्, ‘हामीले जति सूचनाहरु प्राप्त गर्यौं त्यसकै आधारमा प्रतिवेदन बुझायौं। तर त्यतिकै आधारमा हेर्दा पनि कानुन तोडेर सरकारी स्वामित्व हडप्ने अवस्था सिर्जना गरेको देखिएको थियो।’
निजी साझेदारको हायात हड्प्ने योजनाबारे महालेखा परीक्षक कार्यालयले समेत छानिबन गरेको छ। महालेखाको २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा सरकारी सम्पत्तिका संरक्षण गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुलाई कारवाही सिफारिश गरिएको छ। श्रृंखलाबद्ध छानबिनले दोषी ठहर गरे पनि अर्बौंको सरकारी सम्पत्ति हड्प्ने सराफ र श्रेष्ठ परिवारसदस्य कानुनी दायमा पर्न सकेका छैनन्। गैरकानुनी रूपमा सरकारको सम्पत्ति व्यक्तिलाई दिन सहमति जनाउने जिम्मेवार सरकारी अधिकारीले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्।
नेपालखबरले ११ महिनाअघि यो अनियमिततामाथि निरन्तर खोज सुरू गरेको थियो। अनियमितताबारे मिडिया कभरेज हुन थालेपछि निजी साझेदारले राजनीतिक ‘नेक्सस’ मिलाउन सत्तारूढ नेकपाका नेता एवं पूर्व राज्यमन्त्री जितु गाैतमलाई परामर्शदाताको रूपमा नियुक्त गरेका थिए।
हायात सञ्चालन गर्ने तरागाउँ हाेटल्स लिमिटेड २५ वर्षअघि सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत स्थापना भएको कम्पनी हो। त्यतिबेला बौद्धस्थित १ सय ५० रोपनी जग्गा र त्यसमा बनेको संरचनाको मूल्यांकन २ करोड रुपैयाँसहित सरकारले १७ करोड रुपैयाँ लगानी गरी ३९.७७ प्रतिशत शेयर पाएको थियो। निजी साझेदारले होटल हत्याउने क्रममा त्यो घटेर ९.०१ प्रतिशतमा झरेको छ। सञ्चालक समितिमा सरकारको प्रतिनिधित्व तीन जनाबाट एक जनामा सीमित भएको छ।
हायात अनियमितता प्रकरणका थप सामाग्री:
३. हायातका निजी साझेदारको जालझेल छानबिन गर्दै संसदका दुई समिति
४. हायात हत्याउन सराफ–श्रेष्ठको खेलः सञ्चालककै कम्पनीबाट दाेब्बर मूल्यमा सेवा खरिद
५. होटल हायातकाे २५ अर्ब बढीको सम्पत्ति हत्याउने दाउमा सराफ र श्रेष्ठ
८. होटल हायात प्रकरण: झालझेलको पोको फुकाउँदै संसदीय समिति
९. हायात हत्याउन सराफ-श्रेष्ठको खेल: सरकारको अख्तियारी नाघेर अंगुरबाबाद्वारा हस्ताक्षर
१०. हायात हत्याउने खेलविरुद्ध अर्को छानबिन समिति
प्रकाशित १ चैत २०७५, शुक्रबार | 2019-03-15 16:59:48